Mareykanka oo maraakiibtiisa mareysa Somaliya saari doono Ilaalo hubeysan – SBC
Mareykanka oo maraakiibtiisa mareysa Somaliya saari doono Ilaalo hubeysan
Aqalka Wakiilada dalka Mareykanka ayaa meel mariyay qorshe ogolaanaya in ciidamada ilaalada badda ee Mareykanka qaarkood la saari doono maraakiibta iyo gadiid badeedka ay la socdaan shaqaalaha u dhashay wadanka Mareykanka si ay uga hortagaan weerara Burcad badeeda Soomaalida.
Sharciga ay soo saareen Aqalka Wakiilada Dalka mareykanka ayaa ciidamadan u ogolaana inay ka hortagaan weerarkasta oo Burcad badeeda Soomaalida ku qabsada Xeebaha u dhow Soomaaliya inay la dagaalamaan oo ay iska dhiciyaan.
Qorshahan lagu saarayo ciidamada maraakiibta Mareykanka ayaa waxaa uu imanayaa xilli walaaca laga qabo burcad badeeda soomaalida uu sii kordhayo iyadoo mareykanka uu walaac daran ka muujiyay beegsiga gadiidka wada gargaarka oo ay burcada baddu ku beegsanayaan Xeebaha u dhow dalka Soomaaliya.
Sarkaal ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee dhinaca badda ayaa waxaa uu sheegay in burcad badeeda soomaalida xilligan ay sii laba jibaareen goobaha ay ku weeraran gadiid badeedka Maraya Goob ka baxsan xeebaha Soomaaliya isaga oo xusay inay burcadu iminka gadiidka ka soo qafaashaan dalalka xuduudaha Xeebahooda.
Warka dowlada mareykanka ee ku aadan in maraakiibta dalkiisa la saari doono ciidamo hubeysan waxaa uu ku soo beegmayaa xilli dowlada Ingiriiska ay sheegtay inay sidoo kale maraakiibta dalkeeda saareyso ilaalo ka dhicisa Burcad badeeda Soomaalida.